Maxaad u duceyneysaa? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Maxaad u tukatey, marka Ilaah wax walba ogyahay?
Goortaad tukanaysid, ha iskudaybin erayo aan micne lahayn sida kuwa aan Ilaah aaminka ahayn. Waxay u malaynayaan in la maqli doono haddii ay erayo badan ku dhawaaqaan. ka hor intaadan weydiin " (Matayos 6,7: 8 Tarjumaadda New Geneva).
Qof baa mar weydiiyay, "Maxaan ugu baryaa Ilaah, isagoo og wax kasta?" Ciise wuxuu sharraxaadda kor ku xusan ka dhigay horudhac Baryada Rabbi. Eebbe waa ogyahay wax walba. Maskaxdiisu meelwalba ayey joogtaa. Haddii aan sii wadno wax ka weydiista xagga Ilaah, taa micnaheedu maahan inuu sifiican u maqlayo. Tukashadu maaha wax ku saabsan helitaanka Ilaah. Waxaan horey uheynay dareenkiisa. Aabaheena wuu ogyahay wax walba oo nagu saabsan. Masiixu wuxuu yidhi wuu ogyahay fikirradeenna, baahiyaha iyo damacyadeena.
Marka maxaad u duceyneysaa? Aabe ahaan, waxaan rabaa in caruurteyda ay iiga sheegaan markay wax ogaadaan markii ugu horeysay, in kastoo aan horey u aqaanay faahfaahinta oo dhan. Waxaan rabaa in carruurteyda ay ii sheegaan haddii ay ku faraxsan yihiin wax, in kasta oo aan arki karo xiisaha ay qabaan. Waxaan rabaa inaan la wadaago riyadaada nolosha, xitaa haddaan qiyaasi karo waxay noqon doonto. Sida aabbaha bini'aadamka ah, waxaan ahay kaliya hooska dhabta ah ee Ilaaha Aabbaha ah. Intee in ka badan ayuu Eebbe doonayaa inuu la wadaago fikradaheena iyo rajadeenna!
Miyaad maqashay nin waydiiyay saaxiib Christian ah sababta ay u tukatay? Waxay u dhowdahay in ilaahaagu yaqaan runta iyo dhammaan faahfaahinta? Ninkii masiixiga ahaa wuxuu ku jawaabay: haa, wuu ogyahay iyada. Laakiin isagu isagu isagu ma yaqaan nooca aan runta u ahay iyo aragtidayda faahfaahinta. Ilaahay wuxuu rabaa fikradaheena iyo aragtideena. Wuxuu doonayaa inuu qayb ka noqdo nolosheena oo tukashada ayaa qayb ka ah welwelkaas.